Allgedo.com » War-Saxaafadeed ka soo baxday qaar ka mid ah saxiixayaasha Roadmap-ka
Home » News » War-Saxaafadeed ka soo baxday qaar ka mid ah saxiixayaasha Roadmap-ka Print here| By: allgedo.com:
Sunday, August 26, 2012 //
2 Jawaabood Muqdisho, Somalia (AOL) - Go’aankii xalay ka soo baxay Madaxda Sare ee DFKG-ah oo amrayey in dhamaystirka xubnaha Barlamaanka ee ay reebeen Guddiga Farsamada ee Xulitaanka loo gudbiyo Maxkamadda Sare ee Dowladda KMG-ah ay siyaasiyan iyo sharciyanba khalad tahay.
Masawirkan ninka bidix jira waa Maxamed Maxamud Yusuf (Aw-Libaax), ninka dhexda ku jirana waa Maxamed Axmed Caalin.
Heshiiskii Galkacyo ee Maarso iyo kii Addis-Ababa ee Meey 2012, waxay saxiixayaasha Road-mapka ku heshiiyeen ayna saxiixeen in farsamada xulitaanka Barlamaanka cusub loo daayo Guddi madaxbanaan oo ka kooban; 27 xubnood oo Soomaali-ah iyo 7 xubnood oo beesha calamka ka socota. Gudigaas oo xubnaha Barlamaanka odayaal dhaqameedka ka hubinayo in ay buuxiyeen shuruudihii lagu heshiiyey ee ka midnoqoshada xubnaha Barlamaanka cusub.
Ujeeddada gudigaan madaxa bannaan loo sameeyey waxay ahayd in soo xulitaanka Barlamaanka cusub laga ilaaliyo faragelin Dawladda TFG iyo saxiixyaasha kale ee Road-mapka.
Shalay oo taariikhdu ahayd Agoosto 25, 2012 ayaa Guddiga Madaxbannaan shaaciyeen in 253 xubnood oo Barlamaanka cusub 00 ah 92% ay soo dhamaystireen, taas oo ka turjumaysa in tiro Barlamaan oo ka hawlgelikarta Shaqada dastuuriqa ee barlaamaanka ay diyaar yihiin.
Waxaa waajib ah in Guddiga loo daayo gunaanadka shaqada loo igmaday, lagana joojiyo faragelinta lagu hayo, waxayna shaqadoodu dhammaanaysaa marka ay iclaamiyaan in 275-tii xubnood ee Barlamaanka cusub buuxo lana dhaariyey.
Halkaan ka akhri qoraalka labada hogaamiye oo saxiixan.
Maxamed Axmed Caalin Maxamed Maxamud Yusuf (Aw-Libaax)
Madaxweynaha Galmudug Madaxa Ahlu-Sunnah Wal-Jamaaca
2 Jawaabood "
War-Saxaafadeed ka soo baxday qaar ka mid ah saxiixayaasha Roadmap-ka " Ahmed Maxamud barre says:	August 27, 2012 at 6:52 pm	Aragtideeyda Markaan kahadlo niman
Kaas Yuusu Iyo caalin waasaxanyihiin
Kuwa kasoo harjiida iyo kuwa iy udodan
Hayan midna ma astaahilaan
garaad says:	August 28, 2012 at 6:44 pm	wixii lagu heshiiyay wa sida uu ssheegaay caalim iyo libaax iyo farool iyoo gaas waxxaasse si uu daan ugu ffushadoo jcel inuu arintas wax ka bedelo labada shariif oo caloooshoo u shaqaystayaal iy damiir laawayaal